AMISOM oo bayaan kasoo saartay Duqeymaha ciidamada Kenya ka geysteen Gobolka Gedo - Awdinle Online
Home News AMISOM oo bayaan kasoo saartay Duqeymaha ciidamada Kenya ka geysteen Gobolka Gedo
Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa jawaab kasoo saaray bayaan ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo ku saabsan in diyaaradaha dagaalka Kenya ay duqeymo aan kala sooc lahayn la beegsadeen dadka rayidka ee gobolka Gedo.
“AMISOM waxaa waajib ku ah inay si habsami leh uga fuliso howlaheeda loo igmaday gudaha Soomaaliya taasoo la jaanqaadaysa waajibaadka Ciidankeeda, iyadoo la raacayo dhamaan waxyaabaha ay khuseyso. Sidaas darteed waxaa ka go’an inay baaraan dhammaan eedeymaha ku saabsan xadgudubyada xuquuqda Aadanaha ee ay geysteen ciidamadeeda. Marka laga hadlayo tan AMISOM, waa in ay si buuxda u baarto shilka dhacay iyo in waxa ka soo baxa lala wadaago daneeyayaasha ay khuseyso,” ayaa lagu yiri bayaanka AMISOM.
Previous articleXubno lagasaaray gudigii lagu murunsanaa ee doorashooyinka
Next articleXisbiyada Mucaaradka Somaliland oo ku dhawaaqay Isbaheysi Siyaasadeed